7 Healthy Nail Polish Nke Na-adịghị Mgbu - Mma
Osisi ntu asaa kachasị mma ị nwere ike eyi
7 Healthiest Nail Polishes You Can Wear
Eleghị anya ị hụla okwu ahụ bụ '5-free' na ụfọdụ karama ntu gị, na nke ahụ bụ ezigbo ihe. Ọ pụtara na ọ bụ n'efu nke carcinogens ise a maara (formaldehyde, dibutyl phthalate, toluene, formaldehyde resin na camphor) nke a na-ahụkarị na lacquers. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ụdị ekpochapụla ihe ndị a na-egbu egbu na ndị ọzọ site na usoro ha mgbe ha na-achọta ụzọ iji jigide ogo na ejiji nke ndị ogbo ha. Nke a bụ ọkacha mmasị anyị asaa.
Njikọ: 9 Meghan Markle-Na Na Na Na Na Na Na Na Na Polish agba
Aysbọchị Sọnde Ntu Polish
Nke a na-elekọta mmadụ-ọrụ ntu mbọ karịrị nke '5-free' omume-ọ bụ n'efu nke a toxins na-emerụ ahụ, enweghị obi ọjọọ na vegan. Mana ọ bụghị naanị ikwu nnukwu egwuregwu. Agba 50 niile na-aga ogologo creamy ma nyefee ike na-adịgide adịgide ma na-enwu gbaa.
Zụta ya ($ 18)
Mgbe ịchọrọ ntu nke na-abụghị naanị iyi nke ọma, kamakwa na-ewusi ma na-edozi ahụ, akara a na-enweta mmeri. O nweghi nsị itoolu na-enweghị isi ma tinye ya na moisturizing na ike botanicals dị ka mgbede primrose na rapeseed ifuru mmanụ, chamomile na vitamin A, E, na B7. Yokwụ ụgwọ ụcha na abamuru ahụ ike ogologo oge? Debanye aha anyị.
Nnukwu Ahịa Zoya
Site na agba ọhụrụ ewepụtara n’oge ọ bụla, enwere enweghị nhọrọ 5 na - enweghị isi (karịrị 300 ma gụọ) ịhọrọ. N'ebe a ị chere na ọ ga-esiri ike ịchọta nsụgharị dị ọcha nke ndò na-adịghị ahụkebe dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha edo edo dị elu.
Obsessive manye ike ịchọ mma Ntu Lacquer
Nke a bụ nhọrọ ọzọ 5-n'efu. Ma-adị ọcha wezụga, a irreverent mma ika bụ otu n'ime ndị mbụ (na kasị mma) na-enye obi ike, ihe na agba karịrị gị ahụkarị nudes na-acha uhie uhie. Ma ebe ọ bụ na anyị na-ekwu maka nhọrọ ahụike dị mma ebe a, ọ dị mkpa ịmara na nchara ya niile bụ 100% vegan na enweghị obi ọjọọ.
ọgwụgwọ dị irè maka ntutu isi
Tenoverten Ntu Polish
A ọkacha mmasị ụlọ ọrụ ejiji, ụdị lacquers a na-enweghị 8 na-enye ihe niile ịchọrọ na ntu ntu: oge ​​na-adịghị agafe agafe (dị ka nke a na-acha odo odo), ihe dị larịị ma dịkwa mfe na ogologo oge, na-egbuke egbuke .
RMS Mma Mma Polish
Ndị na-akwado ụdị ọkacha mmasị nke òtù nzuzo nwere ike iyi ụfọdụ n'ime akara ngosi ya kachasị mma (dịka Living Luminizer ebe a) na mkpịsị aka ha, kwa. Ndi larịị ndị ahụ na - acha ka nke ihe ịchọ mma ya na ibe ha — ma na-asọgharị na mfe n’enweghị ntụpọ.
Zụta ya ($ 15)
Orly na-agwọ ume + Agba
Ọ bụ ezie na mbọ anaghị adị mkpa 'iku ume' iji nwee ahụ ike, Orly na-eme ka ihe na-egbu egbu na-enye ohere ikuku oxygen iji mee ka ndụmọdụ gị dị mma maka oke. Ma ọ bụrụ na nke ahụ emeghị ka i kwenye, enwere vitamin B5 na mmanụ argan na usoro iji nyere aka mechie nkwekọrịta ahụ.
Ozi ndi ozo nke Brianna Lapolla dere.
otu esi eji sneakers na jeans
esi lee ihe nkiri na ntanetị
arụrụ n'ụlọ mara mma maka ịcha ọcha anụ
emilia clarke enyi nwoke list